Ndị njem nleta kpọpụrụ, tọrọ atọ, kagbuo: Ọgba aghara na Germany, Switzerland na Austria
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị njem nleta kpọpụrụ, tọrọ atọ, kagbuo: Ọgba aghara na Germany, Switzerland na Austria
Austria na -agbasa ozi ọma • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Liechtenstein • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọtụtụ puku ndị njem na-emechi ezumike Krismas ikpeazụ na Alps na Sọnde ka a na-ebupụ. Nke a gụnyere ndị ọbịa na glacier Matterhorn a ma ama na Switzerland. Ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ oloko nwetara nkagbu uka.
Oke snow karịa ka ọ na-adịbu na Alps ebipụla obodo ndị dị n’ebe ugwu dị elu ma mụbaa iyi egwu nke nnukwu ugwu. Ọtụtụ puku ndị na-eme ezumike oyi na-anọchi na ụfọdụ ebe egwuregwu kachasị ewu ewu na ugwu ugwu na Germany, Austria, na Switzerland.
Ndị ọchịchị dọrọ aka ná ntị na Sọnde banyere nnukwu ihe egwu nke nnukwu mmiri mgbe snow snow kpuchiri Central Europe na Satọde, na-egbu ma ọ dịkarịa ala mmadụ abụọ ma na-ejide ọtụtụ narị ndị njem nleta na obodo ndị ugwu ugwu nke snow kwụsịrị.
Otu onye nwụrụ na Satọdee mgbe ụgbọ ala kwọọrọ n’okporo ụzọ dị warawara dị nso na obodo Bad Toelz wee kụọ ụgbọala ọzọ. Otu nwoke dị afọ 19 mechara nwụọ site na mmerụ ahụ kpatara nkukpọ ahụ. Ndị ọzọ merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ.
Otu nwanyị 20 nwụrụ na Saturday na nnukwu mmiri na Germany. Nwanyị ahụ so na otu ndị njem gara ugwu Teisenberg (elu 4,373 ụkwụ) mgbe nnukwu mmiri ahụ mere. Ọ dịghị onye ọzọ merụrụ ahụ na enweghị nkọwa ndị ọzọ ewepụtara.
N’Austria, onye mgbasa ozi ọha na eze bụ ORF kwuru na otu nwoke dị afọ 26 nwụrụ na Sọnde mgbe nnukwu mmiri kụrụ ya mgbe ọ na-eme ski na nso obodo Schoppernau.
Ihe dị ka mmadụ 600 bi na ndị njem bịara bepụ n’obodo ndị dị na mpaghara Styria nke Ọstria mgbe okporo ụzọ na-agaghị aga. Okporo ụzọ ndị ọzọ snow na-egbochi ebipụkwa obodo ndị ọzọ dị n’ugwu Alps.
Ọtụtụ narị ndị njem nọgidesiri ike ruo ọtụtụ awa n'ụgbọ okporo ígwè n'isi ụtụtụ Sọnde mgbe otu osisi snow jupụtara na ha dakwasịrị ụzọ ndị dị nso Kitzbuehel, Austria.
A kpọpụrụ obere obodo nta nke St. Johann nke dị n'Austria n'ihi na ndị ọchịchị tụrụ egwu na oké ifufe nwere ike ịkpalite nnukwu mmiri.
Karịrị A kagburu ụgbọ elu 200 na Satọde na Munich, Germany, dị ka Flight Aware si kwuo. Ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ emetụtara gụnyere Innsbruck na Zurich, n'Austria. A kagburu ụgbọ oloko na mpaghara ahụ.
nkagbu Central Europe ọgba aghara Christmas nkuku okuku kwụsịrị ịkpụ bepụ n'oge Eweghaara ya nwere ma ama Germany glasia ezumike awa gụnyere mụbara merụrụ ahụ mmerụ gburu okowot nwoke uka kasị ewu ewu ugwu Munich nbsp ewu ewu tọhapụrụ kọrọ ndị bi ntụrụndụ n'ihe ize ndụ n'okporo ụzọ skai ogige ntụrụndụ egwuregwu obere snow St tọrọ atọ ike arapara Switzerland Mpaghara ọtụtụ puku iyi egwu tour obodo obodo ụgbọ okporo ụgbọ oloko tọrọ atọ osisi mbụ ụgbọala obodo nleta ikuku oyi nwaanyị Zurich